ကိုယ့်အမရဲ့ သတိုးသားလောင်းကို မြူဆွယ်မိတဲ့ မိန်းကလေးအဖြစ် - Update News
လက်မထပ်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ ကောင်မလေးက သူ့အိမ်ကို အလည်ခေါ်ပါတယ်။သူ့အိမ်လည်း ရောက်သွားရော့ တအိမ်လုံးမှာ သူ့ညီမ တစ်ယောက်ပဲ တွေ့တယ်။ သူ့ညီမလေး ဘယ်လောက်ညှို့အားပြင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိလဲဆိုတာ ပြောရင် ယုံမှာတောင်မဟုတ်ဘူး။
ကြည့်အုံး အဲ့ဒီနေ့မှာမှ အဲ့ဒီကောင်မလေးက (မီနီ-skirt) တိုတိုလေးကို ဝတ်ထားပြီး အတွင်းခံဘရာစီယာလည်း ဝတ်မထားဘူး။ အဲ့ဒီကောင်မလေးက ပြောတယ် သူ့အစ်မက အခုဆို အရေးကြီး ကိစ္စနဲ့ အပြင်ကို ထွက်သွားတယ်။
ညနေမှ ပြန်လာမည် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောပြဖို့ သူ့ကို မှာထား တယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် အိမ်ထဲမှာ သူ့ညီမလေးနဲ့ စကားပြောနေတုန်း သူ့ညီမလေးက ကျွန်တော့် အနားကို ကတ်ပြီး တိုးတိုးလေး ပြောတယ်။ သူ့အစ်မနဲ့ လက်မထပ်ခင်ကျွန်တော့် တစ်ဘဝလုံးကို သူ့အစ်မဆီ လုံးဝ မပုံအပ်လိုက်ခင်၊ ကျွန်တော်နဲ့ တစ်ကြိမ်လောက် ဖြစ်ဖြစ် အတူတူ ရှိနေချင် တယ်တဲ့။
သေဟဲ့ ဆိုပြီး ကျွန်တော် တော်တော်လေး လန့်သွားတယ်။ ဘာစကားမှတောင် ပြန်မပြော နိုင်ဘူး။ ဒါနဲ့ အဲ့ဒီကောင်မလေးကဆက်ပြောပါတယ် ညီမတော့ အိပ်ခန်းထဲ သွားတော့မယ်။ တကယ်လို့ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ အတူတူ ပျော်မြူးချင်တယ်ဆိုရင် ညီမဆီ လာခဲ့ပါနော်တဲ့ ကျွန်တော် ချက်ချင်းပဲ ချာခနဲ လှည့်ပြီး ကျွန်တော့် ကားဆီ သွားဖို့ အိမ်ရှေ့ တခါးမကြီးဆီ လျှောက်သွားလိုက်တယ်။
တံခါးကို ဖွင့်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ ဟိုက်ရော့ တမိသားစုလုံး ပါလား! ကျွန်တော့်ရဲ့ ယောက္ခမလောင်း မိသားစု ပေါ့ဗျာ။ အားလုံး လက်ခုပ်တွေ တီးနေကြတယ်။ ယောက္ခမထီးကြီးဆို မျက်ရည်တွေ ဝဲလို့ ကျွန်တော့်ကို လာဖက်တယ် “ အဖေတို့က သားရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို စမ်းခဲ့တာကွာ“ သားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အတွက် အရမ်းကို ဝမ်းသာ မိပါတယ်ကွာ။ ကျနော် နောက်ဆုံး ယောက်ျားထုကြီးကို ကိုယ်တွေ့ ပညာပေး စကားလေး ပြောချင်တာ ကတော့ “သတိ – သင့် ကွန်ဒုံးကို ကားထဲမှာ သေချာသိမ်းပါ ”
လက္မထပ္ခင္ လြန္ခဲ့တဲ့ တပတ္က ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ေကာင္မေလးက သူ႔အိမ္ကို အလည္ေခၚပါတယ္။သူ႔အိမ္လည္း ေရာက္သြားေရာ့ တအိမ္လုံးမွာ သူ႔ညီမ တစ္ေယာက္ပဲ ေတြ႕တယ္။ သူ႔ညီမေလး ဘယ္ေလာက္ညႇိဳ႕အားျပင္းၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိလဲဆိုတာ ေျပာရင္ ယုံမွာေတာင္မဟုတ္ဘူး။
ၾကည့္အုံး အဲ့ဒီေန႔မွာမွ အဲ့ဒီေကာင္မေလးက (မီနီ-skirt) တိုတိုေလးကို ဝတ္ထားၿပီး အတြင္းခံဘရာစီယာလည္း ဝတ္မထားဘူး။ အဲ့ဒီေကာင္မေလးက ေျပာတယ္ သူ႔အစ္မက အခုဆို အေရးႀကီး ကိစၥနဲ႔ အျပင္ကို ထြက္သြားတယ္။
ညေနမွ ျပန္လာမည္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာျပဖို႔ သူ႔ကို မွာထား တယ္တဲ့။ ဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ အိမ္ထဲမွာ သူ႔ညီမေလးနဲ႔ စကားေျပာေနတုန္း သူ႔ညီမေလးက ကြၽန္ေတာ့္ အနားကို ကတ္ၿပီး တိုးတိုးေလး ေျပာတယ္။ သူ႔အစ္မနဲ႔ လက္မထပ္ခင္ကြၽန္ေတာ့္ တစ္ဘဝလုံးကို သူ႔အစ္မဆီ လုံးဝ မပုံအပ္လိုက္ခင္၊ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ တစ္ႀကိမ္ေလာက္ ျဖစ္ျဖစ္ အတူတူ ရွိေနခ်င္ တယ္တဲ့။
ေသဟဲ့ ဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ေလး လန႔္သြားတယ္။ ဘာစကားမွေတာင္ ျပန္မေျပာ ႏိုင္ဘူး။ ဒါနဲ႔ အဲ့ဒီေကာင္မေလးကဆက္ေျပာပါတယ္ ညီမေတာ့ အိပ္ခန္းထဲ သြားေတာ့မယ္။ တကယ္လို႔ ေနာက္ဆုံး အေနနဲ႔ အတူတူ ေပ်ာ္ျမဴးခ်င္တယ္ဆိုရင္ ညီမဆီ လာခဲ့ပါေနာ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္ ခ်က္ခ်င္းပဲ ခ်ာခနဲ လွည့္ၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ ကားဆီ သြားဖို႔ အိမ္ေရွ႕ တခါးမႀကီးဆီ
ေလွ်ာက္သြားလိုက္တယ္။ တံခါးကို ဖြင့္လိုက္တယ္ ဆိုရင္ပဲ ဟိုက္ေရာ့ တမိသားစုလုံး ပါလား! ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ေယာကၡမေလာင္း မိသားစု ေပါ့ဗ်ာ။ အားလုံး လက္ခုပ္ေတြ တီးေနၾကတယ္။ ေယာကၡမထီးႀကီးဆို မ်က္ရည္ေတြ ဝဲလို႔ ကြၽန္ေတာ့္ကို လာဖက္တယ္
“အေဖတို႔က သားရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရားကို စမ္းခဲ့တာကြာ“ သားေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ အရမ္းကို ဝမ္းသာ မိပါတယ္ကြာ။ က်ေနာ္ ေနာက္ဆုံး ေယာက္်ားထုႀကီးကို ကိုယ္ေတြ႕ ပညာေပး စကားေလး ေျပာခ်င္တာ ကေတာ့ “သတိ – သင့္ ကြန္ဒုံးကို ကားထဲမွာ ေသခ်ာသိမ္းပါ ”
Previous Article မကောင်းဆိုးဝါးဝင်ပူးလို့ဆိုပြီး 14နှစ်အရွယ် ခယ်မတော်စပ်သူကိုပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
Next Article လိမ်နည်းအသစ်တစ်ခုကြောင့် လူတော်တော်များများ ဒီကာလထဲဒုက္ခတွေ့နေရပြီ